एकै परिवारका पाँचजनाले गरे सामूहिक आत्महत्या ! — donnews.com
एकै परिवारका पाँचजनाले गरे सामूहिक आत्महत्या !
'श्रीमान् मानसिंहले मदिरा सेवनसँगै लगातार तनाव दिएपछि सामूहिक आत्महत्या' : प्रारम्भिक अनुसन्धान
दैलेख । दैलेखको आठविस नगरपालिका–३ निमाइलका एउटै घरका पाँचले कर्णाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । यही फागुन २३ गते राति घरबाट बेपत्ता भएकी सुखी बडुवाल, उहाँका तीन छोरी र एक छोराले सामूहिकरुपमा कर्णाली नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ ।